PlayStation စတိုးအတွက်လျှော့စျေးကုဒ်ကိုယခုရရှိနိုင်ပါပြီ Gadget သတင်း
မင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲငါတို့သိပြီးသားပဲ Mundivgames time- နောက်ဆုံးဒီဇင်ဘာလမှာ PlayStation Network ခံစားခဲ့ရသည် DDoS တိုက်ခိုက်မှု သော၏အွန်လိုင်းစနစ်ကနှိမ့်ချခဲ့သည် Sony က နှစ်ရက်အဘို့။ ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွက်တာဝန်ရှိအဖွဲ့က ပုတ်သင်ညိုအသင်း, ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်သူတို့ကိုယ်ပိုင်ဆေးဝါးတစ်ဇွန်းပေးလိမ့်မယ်။
အသုံးပြုသူများ၏ထိခိုက်လွယ်သောအချက်အလက်များကိုဂျပန်ကုမ္ပဏီကအာမခံသည် PlayStation Network ထိခိုက်မှုမရှိခြင်းနှင့်၎င်းတို့သည်ဖောက်သည်များအားလုံးကိုအလားတူအစီအစဉ်ဖြင့်လျော်ကြေးပေးလိမ့်မည် ပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ် ကြောင်းသူ့အဘို့ကြံစည်ခဲ့သည် PSN ဂိတ်။ သော်လည်းအဆုံး၌တည်၏ Sony က သာတစ်လတိုးချဲ့ပါလိမ့်မယ် PlayStation Plus အား ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရနှင့် 10% လျှော့စျေးကုဒ်ကမ်းလှမ်းခဲ့ကြသူစာရင်းသွင်းသူမှ။
PS Plus, Music Unlimited၊ ဗီဒီယိုများနှင့်ဘွတ်ကင်များအတွက် subscription များမှအပအဆိုပါကုဒ်များသည်ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက်၊ စပိန်အချိန် ၁၀း၀၀ နာရီအထိတရားဝင်ဖြစ်သည်။ အလွန်အရေးကြီးသည်မှာသင်သည်အကြောင်းအရာမှရယူလိုပါက PS Vita၊ PlayStation TV o PSPသင်အသုံးပြုရမည် PlayStation Store ဝဘ်ဆိုက် လျှောက်လွှာများအစားလျှော့စျေးကုဒ်တစ်ခုကိုတောင်းသည့်အခါ ၀ ယ်သည့်အချိန်တွင်ကုဒ်ကိုထည့်ပါ။
သင့်တွင်အခြားဒေသတစ်ခုတွင်အကောင့်တစ်ခုရှိပါကဤလျော်ကြေးပေးခြင်းအစီအစဉ်ကိုပါ ၀ င်သောနိုင်ငံများအတွက်အခြားကုဒ်နံပါတ်များနှင့်အတူစာရင်းပြုစုထားသည်။
သြစတြေးလျ - K5B9PMJQMF
သြစတြီးယား - A9PMAFADEM
ဘယ်လ်ဂျီယံ - KPBH6DAH9D
ဘူဂေးရီးယား - J49QT96DLD
ဖင်လန် - 2BTQAHF2AL
ဂျာမနီ - B6P3N5ATNK
ဂရိ - 7AAQQC83F9
အိန္ဒိယ - R99P6BR9FG
အစ္စရေး - QG6DQJKN69
လူဇင်ဘတ် - FQLKDNN5BR
မော်လတာနိုင်ငံ - TBT5NHCG9Q
နော်ဝေး - JC9EEEHGLR
ပေါ်တူဂီ - PBTRQ7FGBF
ရုရှား - T34NK72FQ6
ဆလိုဗေးနီးယား - HPDEG94QQF
ဆွီဒင် - 3E4MBKJTG6
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ သင်၌သင်ရှာတွေ့နိုင်သည့်နောက်ဆုံးပေါ်ကမ်းလှမ်းချက်များဖြင့်သင့်အားထားခဲ့ပါ PlayStation Store က ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ:
PlayStation ဆိုင်အရောင်းအ ၀ ယ်
2K အထူး (ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်မှစ၍)
Borderlands: Pre- ဆက်ဆက်
50% လျှော့စျေး - မူလစျေးနှုန်း€ 49,99 - ကမ်းလှမ်းချက်သည်ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်တွင်အဆုံးသတ်ပါမည်။
75% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 7,99
မာဖီးယား II: ဂတ်စ်
50% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 2,49
မာဖီးယား II ကို - Renegade
မာဖီးယား II - စစ်သူရဲကောင်း
မာဖီးယား II - Greaser Pack
50% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 2.49
မာဖီးယား II - ဂျိုးရဲ့စွန့်စားမှု
65% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 7,99
မာဖီးယား II - ဂျင်မီ၏သစ္စာဖောက်
မာဖီးယား II - ဂျင်မီရဲ့ Vendetta
မာဖီးယား II ကိုနောက်ထပ်အကြောင်းအရာအစုအဝေး
70% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 21,99
Borderlands Add-On Extravasplosion ထုတ်ဝေမှု
75% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 19,99
BioShock2နောက်ထပ်အကြောင်းအရာ
70% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 16,99
Duke Nukem Forever - Icons Parody Pack ကိုကြိုဆိုပါ
Duke Nukem Forever - ငါ့ကိုပုံတူပွားပေးတဲ့ဆရာဝန်
အဆိုပါဗျူရို XCDC - Code ကို Breaker
70% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 2,99
အဆိုပါဗျူရို XCDC - အလင်း Plasma ပစ္စတို
50% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 0,79
70% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 4,49
Headhunter 2: Wattle Gobbler ဖြစ်သည်
50% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 2,99
Headhunter 3: ကြေးစားနေ့
Borderlands2- Headhunter 4: မင်္ဂလာဆောင်နေ့သတ်ဖြတ်မှု
Borderlands2- Headhunter 5: Crawmerax ၏သား
50% off - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 2,99
Borderlands2- Dragon Keep အပေါ် Tiny Tina ၏စော်ကားမှု
65% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 9,99
Borderlands2- Headhunter 1: သွေးထွက်သံယိုရိတ်သိမ်း
50% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 4,99
Borderlands2- မစ္စတာ Torgue ၏ Carnage လှုပ်ရှားမှု
Borderlands2- Ultimate Vault Hunter အဆင့်မြှင့်တင်မည့်အထုပ်
Borderlands2- ဆာ Hammerlock ၏ Big Game Hunt
Borderlands2- ဗိုလ်ကြီး Scarlett နှင့်သူမ၏ Pirate's Booty
Bioshock Infinte - တိမ်များကြားတိုက်ပွဲ
Bioshock Infinite - ပင်လယ်မှာသင်္ဂြိုဟ်ခြင်းအပိုင်း ၁
70% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 14,99
Bioshock Infinite - သင်္ချိုင်းမှာသင်္ဂြိုဟ်ခြင်း - အပိုင်း ၂
Borderlands TPS - ချောမောသောဂျက် Doppleganger Pack
25% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 9,99
75% off - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 14,99
Duke Nukem ထာဝရ
80% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 19,99
မာဖီးယား II ကို
75% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 29,99
The Dark II ကို
80% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 29,99
အထူး Ops: အဆိုပါလိုင်း
BioShock Infinite ကို
75% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 59,99
အဆိုပါဗျူရို: XCOM Declassified
80% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 24,99
XCOM: Enemy အတွင်းမှာပဲ
75% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 39,99
45% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 59,99
ဒစ်ဂျစ်တယ်အထူးလျှော့စျေး (ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်ကုန်ဆုံးသည်)
Curve ဒီဂျစ်တယ် PS4 Mega အစုအဝေး
50% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 21,99
50% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 17,99
ရာဇပလ္လင်၏ဂိမ်း: ရာသီ 1 - ရာသီ Pass
30% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 24,99
Guacamelee! စူပါ Turbo ချန်ပီယံရှစ် Edition ကို
60% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 13,99
Lara Croft နှင့် Osiris ဘုရားကျောင်း
50% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 19,99
Lara Croft နှင့် Osiris & Season Pass Pack ၏ဘုရားကျောင်း
50% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 28,99
50% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 7,49
ဘယ်တော့မှတစ်ယောက်တည်းမနေ (Kisima Ingitchuna)
40% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 14,99
70% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 9,99
50% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 12,99
Strike Suit Zero: ဒါရိုက်တာ၏ဖြတ်
Borderlands မှပုံပြင်များ - ရာသီ Pass
30% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 19,99
50% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 14,99
အလွန်သေးငယ်သော Troopers ပူးတွဲ Ops
50% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 6,99
PixelJunk သေနတ်သမား Ultimate
60% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 11,99
50% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 9,99
60% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 12,99
SENRAN KAGURA Bon Appétit။
40% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 29,99
Urban Trial Freestyle (PS3 / Vita အစုအဝေး)
80% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 13,99
60% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 6,99
Guacamelee! Fantastic အစုအဝေးကို
60% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 17,99
50% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 15,99
Lara Croft နှင့်အလင်း၏ဂါးဒီးယန်း
65% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 12,99
အလေးအနက်ထားဆမ် 3: BFE
60% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 19,99
Spelunker HD Ultimate Edition ကို
60% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 16,99
Spelunker HD ကို
60% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 9,99
Curve Digital Triple Features - လှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်
50% လျှော့စျေး - မူရင်းစျေးနှုန်း€ 23,99
ရက်သတ္တပတ်၏အပေးအယူ (ဇန်နဝါရီ ၂၈ ရက်ပြီးဆုံးသည်)
€ 69,99, ယခု€ 49,99 ဖြစ်ခဲ့သည်
အဆိုပါ Crew ရွှေ Edition ကို
€ 94,99, ယခု€ 64,99 ဖြစ်ခဲ့သည်
ပလက်တီနမ်လေယာဉ်အမှုထမ်းခရက်ဒစ် Pack ကို
€ 49,99, ယခု€ 39,99 ဖြစ်ခဲ့သည်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » NOTICIAS » PlayStation Store အတွက်လျှော့စျေးကုဒ်ယခုရပြီ
အန်သိုနီ Giret ဟုသူကပြောသည်
Anthony Giret ကိုပြန်သွားပါ
iOS အတွက် emulators အစု